नासाले मंगल ग्रहमा पानी पत्ता लायो रे - फेसबुक फण्डा - साप्ताहिक
- भूतको भिनाजु
बिहान–बिहानै नमज्जाले बाडुल्की लागिरा’छ । गर्लफ्रेन्ड भनाउँदीले त के सम्झिन्थी होली र खै ?
यति बिहानै सम्झिने पक्कै पनि घरबेटी हुनुपर्छ । एक गते नि पैसा दिएन, आज बिहानै माग्नुपर्ला भनेर । हिजो पनि घुरेर हेर्दै थे बूढा ।
जाबो १८ करोडको गाडी त हो नि...
त्यत्ति पनि था’छैन ??
धनभन्दा विद्या ठूलो भन्ने कुरा ।
डियर हुनेवाली अज्ञात श्रीमती, राम्रो केटा आए बिहे गर्दा हुन्छ है । पछि मसँग बिहे गरेर, मलाई माग्न डाक्टर आ’को थियो, पाइलट आ’को थियो, डिभीवाला आ’को थियो, पीआरवाला आ’को थियो, सरकारी जागिरे आ’को थियो, मेरै भाग्य फुटेको, तिमीसँग बिहे गरें भनेर कचकचचाहिँ नगर्नू ।
अर्काकी गर्लफ्रेन्ड चैं मागेर बिहे गर्न हुने....
अनि अर्काकी श्रीमती चैं किन माग्न नहुने ?
घोर अन्याय भो प्रभु, घोर अन्याय ।
उनी : तिम्री जीएफ छैनन् ?
म : थी तर पोइला गई ।
उनी : फेरि नबना’को ?
म : बना’को, फेरि पोइला गई ।
उनी : अब नबनाउने ? म छु नि ।
म : किन ? तिमीलाई नि पोइला जान मन लाग्या हो र ?
कृपया मलाइ लाइन मार्ने ट्राइ नगर्नुहोला, म बुक भैसकेको मानिस हुँ ।
नोट : यो स्टाटस मलाई गर्लफ्रेन्डले जबरजस्ती लेख्न लगाएकी हो ।
नासाले मंगल ग्रहमा पानी पत्ता लायो रे । अब हाम्ले चैं रौसी र सितन मात्र लिएर जाँदा हुने भयो..।
भर्जिन नै मर्ने रहर थियो तर जिन्दगीले पलपल बलात्कार गरिरह्यो ।
हुँदाहुँदा अब त फेसबुकले पनि जिस्क्याउन थालेछ ।
People You May Know भन्दै आफ्नै EX लाई देखाइदिन्छ ।
जसलाई केटाहरूले सिधै कुकुर्नी भन्न सक्दैनन् नि..... हो, तिनीहरूलाई You Are Different भनेर टारिदिन्छन् ।
आज पहिलो चोटि उसले फोन नम्बर मागी.. खुसीले पागल हुँदै मैले उसलाई आफ्नो फोनै दिएर पठाएँ । यो स्टाटस त मैले क्यालकुलेटरबाट लेख्या हो.. कस्सम ।
आफ्नी जीएफलाई कहिल्यै नरुवाउनू है केटा हो !
अर्को कोही उसको आँसु पुछ्न तयार भएर बसिरा हुन्छ ...अनि खालाऊ ।
Break Up Hurts Most रे.. हावा कुरा ..गाँजा भरेको चुरोट तान्दा बाउले देखेर Flying kick ले हानेको पीडा थाहा छ ? कत्ति न ...
जिन्दगीको असली मज्जा त्यतिबेला आयो,
जब बाटोमा हिंड्दा भूपूकी छोरीले भनिन्...मामु हेर्नुस् न, कस्तो हिरो अंकल ।
माया र प्रेममा केवल एउटै फरक रहेछ—
माया बसेर पिसाब फेर्छे अनि प्रेम उठेर ।
माइतबाट फर्किएकी आईमाई र विदेशबाट फर्किएको लोग्नेमान्छेको फुर्ती थामी नसक्नु हुन्छ ।
मंसिर लाग्दैछ ।
थाहा छैन अब क–कसका बेबीहरूको अस्ट्रेलियाको भिसा लाग्ने हो ।
केही जानोस् या नजानोस्,
X-ray हातमा परेपछि माथी उचालेर नहेर्ने नेपाली पनि के नेपाली ?
जहिले नि चाइनिज सामानलाई मात्र दोष नदेऊ ।
तिमी त नेपाली नै थियौ,
फेरि किन टिकेन तिम्रो सम्बन्ध ?
यदि पाप गरेर थाकिसक्यौ भने भित्र आउनू
एउटी केटीले त्यसको तल
यदि थाकेका छैनौ भने मन्दिरको पछाडि आउनू ।